दूध चिया किन हानिकारक ? | लगातार समाचार
Home जीवन/ शैली दूध चिया किन हानिकारक ?
२५ जेष्ठ २०७७, आईतवार ११:२०
जेष्ठ २५ । दूध चियाको सौखिन हुनुहुन्छ भने सर्तक रहनुहोस् किनकि चियामा दूध मिसाएर पिउँदा त्यसाको लाभ नष्ट भएर जाने गर्दछ।
दूध चियाको सेवनले तपाईको स्वास्थ्यमा कैयौं प्रकारको हानी समेत पुर्‍याउने गर्दछ। तर बिना दूधको चिया अर्थात कालो चिया तपाईको मुटु र स्वास्थ्यलाई फाइदाजनक हुन्छ।
तर्सथ दूध चियाको चुस्किमा रमाउने लत लागेको भए पनि कालो चिया पिउने बानि बसाउनुहोस्।
दूध चियाको नियमित सेवनगर्दा यसले शरीरमा नकारात्मक हानी पुर्याउने गर्दछ। कैयौं प्रकारको शोध अनुसन्धान अनुसार चियामा दूध मिसाउँदा चियामा हुने तत्वको जैविक गतिविधि बदलिन्छ र यसको सकरात्मक प्रभाव नष्ट भएर जाने गर्दछ।
दूध चियाको सेवनले छालामा बिभिन्न प्रकारको समस्या हुने गर्दछ। यस अलावा अनुहारमा डण्डिफोर आउन पनि दूध चियाको सेवन सहायक रहने गर्दछ।
चियाको अधिकतम सेवनले शरीरमा गर्मी उत्पन्न हुने तथा शरीरको रसायनमा असन्तुलन पैदा गर्दछ। यस अलावा यी समस्या पनि चियाको अत्यधिक सेवनका कारण हुने गर्दछ।
अत्यधिक चियाको सेवन कब्जियतको कारक बन्न सक्छ। चियामा पाइने थियो फिलाइन नामक रसायनले शरीरलाई डिटक्सीफाई गर्न मद्दत गर्दछ। तर अत्यधिक थियोफिलाइनले शरीरमा डिहाइड्रेशनको शिकार बनाउने गर्दछ। जसका कारण कब्जियत हुनसक्छ।
चियामा क्याफिनको मात्रा पाइन्छ। यस्तोमा दैनिक २ कप भन्दा बढि मात्रामा चियाको सेवन गरेमा अनिन्द्रालगायत निन्द्रा सम्बन्धिको समस्या हुने गर्दछ। निन्द्रामा हुने समस्या दूध र चिनीको चियाबाट हुने आमदुष्प्रभाव हो।
३) मानसिक रोग
भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ तर कतिपय अवस्थामा दूध चियाको सेवन मानसिक रोगको कारक बन्दछ। यसको सेवनले मानसिक स्वास्थ्य, चिन्ता, तनाव र बेचैनी बढ्ने गर्दछ।
अत्यधिक दूध चियाको सेवनले पेट फुल्ने तथा ग्याष्ट्रिक लगायतको समस्या हुने गर्दछ। चियामा हुने क्याफिन पेट फुलाउने कारक बन्दछ। यसका साथै दुध र क्याफिनको मिश्रण ग्यास बनाउने काम गर्दछ।
बिना दूधको अर्थात कालो चियाको सेवन मुटुका लागी लाभदायक मानिन्छ। चियामा बढि मात्रामा चिनीको प्रयोग गर्दा शरीरमा चियाको लाभ पर्याप्त पुग्ने गर्दैन। चियामा हुने एन्टिइन्फ्लेमेटरी गुणले क्यान्सर जस्तो खतरनाक रोगबाट बचाउने गर्दछ।